Let's Go and Walk to Our Brighten Future.: November 2007
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအပေါင်းတို့အား တိုက်တွန်းနှိူးဆော်ချက်။
ခရစ်နှစ် ၂၀၀၈ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးနေ့တွင် နအဖ စစ်အစိုးရမှ လွတ်လပ်ရေးပွဲများ ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအပေါင်းတို့ အနေဖြင့် မြန်မာပြည်သည် ၄၅ နှစ်ပတ်လုံး စစ်ကျွန်ဘ၀ အောက်၌ လွတ်လပ်မှူဆိတ်သုဉ်းကာ အဖက်ဖက်မှ အတိဒုက္ခရောက်နေသည်ကို ကမ္ဘာက သိရှိလာအောင် ၀ိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ လာမည့် လွတ်လပ်ရေးနေ့တွင် -
၁။ ကျောင်းသားပြည်သူလူထုအားလုံး အနီရောင်ဝတ်စုံ (သင်္ကန်းရောင်ကိုယ်စားပြု)
၂။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြည်တွင်းပြည်ပ လူထုလှူပ်ရှားမှူသပိတ် သင်္ကန်းရောင်တော်လှန်ရေး (Saffron Revolution) ပြန်လည်ဆင်နွှဲကြရန်။
၃။ ကမ္ဘာ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းအား မြန်မာပြည်သည် လက်ရှိအချိန်အထိ စစ်ကျွန်ဘ၀ ကျရောက်နေသည်ဖြစ်၍ လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ တကယ်မလွတ်လပ်သေးကြောင်း တရားဝင် ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ရန်။
ဖော်ပြပါ အချက် ၃ ချက်ကို အားလုံးအတူတကွ ဟန်ချက်ညီညီ ပူးပေါင်း ပြုလုပ် ကြပါရန် သာသနရက္ခိတ အဖွဲ့ (သာသနာ့ဥသျှောင် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ) က တိုက်တွန်း လိုက်သည်။
သာသနရက္ခိတ အဖွဲ့ ။
၂၀၀၇-ခု၊နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်။
၁၃၆၉-ခု တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ ။
Posted by Peaceful Walking at 7:57 PM 1 comments
မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာပေါ်က ထုံးစံအတိုင်း ဗြောင်လိမ်နေပေမဲ့သေဆုံးမှုသတင်းအတိအကျကတော့ ဒီလိုပါ။
Those who died during the protest in Burma
* (1) Name: Kenji Nagai
Adress: Nakano Ward, Tokyo, Japan
Date of death: 27 September, 2007
Remark:He isaphoto journalist of freeland
* (2) Name: Ko Soe Than (b) Si Tone
Address: 716 , 26 Street , No5Quarter, S\_Okkalapa
* (3) Name: Myo Min Htun
Address: 287 , 24 Street , No.7Quarter, S\_Okkalapa
Father: U Than Htun
* (4) Name: Zayar Naing
Address: Mahor Video rent shop , Thura2Street, No.9Quarter, S\_Okkalapa
Remark: He isatenth student of Basic Education High School- BEHS (2) School , S\_Okkalapa, Rangoon
* (5) Name: Pho Zaw
Address: Dan Ohn Set, Marga street, N/Oakkalapa, Rangoon
Date of death: 29 September 2007
* (6) Name: Sunny (alais) kalamalay
Address: Bo Htun Zan Quarter, Daw Bon, Rangoon
* (7) Name: Ven, Thila Vantha
Address: Yuzana Kyaunghtai monastery, Myintkyina, Kachin State
Date of death: 26 September 2007
* (8) Name: Tun Tun Lin
Address: 1060. 13 street,7ward, S/Oakkalapa, Rangoon
Date of death: 27 September 2007
* (9) Name - Thet Paing Soe
Father name - U Myint Win
Mother name - Daw Aye Pyone
Address - NO21, Min Nanda street, Dawpon, Rgn
Education -9standard BEHS 3, Tamwe Tsp, Rgn
Date of death - 27 September 2007
* (10) Name - Kyaw Kyaw
Address - Shwebo street,5ward, S/Oakkala, Rangoon
* (11) Name - Than Aung
Address - Innwa street,6ward, S/Oakkala, Rangoon
* (12) Name - Win Shwe
Address - Aung Minglar ward, Kyaukpadown
Date of detained - 27 September 2007
Date of death - First week, October
Pleace of death - Palate Myot Police Center
* (13) Name - Ko Phyo
Address -9ward, South Okkalapa Township
Date of death - N/A
Pleace of death - South Okk La Pa.
* (14) U Hla Myint
Address - Ava7Street,6Ward, South Okkalapa
Date of death - 27 September, 2007
He went to State Middle School No.4to pick up his son but he could not pick up his son and he died. Family members were told not to do funeral ceremony as of Buddah traditional.
(15) Name – Tun Lynn Kyaw
Education – High School Student
Place of Dead – In front of S.H.S (3) Tamwe, Rgn
* 16) Name – Soe Myint
Address – Kam villiage tract, Taikyi Tsp, Rgn
Place of death – Thayet Prison
Date of death – 24 October 2007
(The convict from Thayet prison U Soe Myint who was arrested and sentenced to prison term in connection with taking part in recent protest, died on 24-10-07 at the hospital.)
* 17) Name – Nyi Pu Lay(NLD)
Address - Taungup, Arakan
Date of death – 19 October 2007
(He was an enthusiastic participator in last month's protests. He had been in hiding from arrest for nearly 20 days before his dead body was found decaying inastream near the township.)
* 18) Name: Ko Ko Win
Father name: U Ngwe Win
Mother name: Daw Win Win Myint
Address: NO. 376, Maga (14) street, 12 word, South Oakkalapa, Rangoon
Date of Death:3November 2007
On 27 September 2007, he was badly beaten, mainly on his back and head, by military troops, Swanaharshin and riot police troops near the Sule Pagoda. Being with serious injuries, he could manage to escape from arrest and since then, he has been suffering from pain, headache, dizzy and vomit at all times, according to his family members. Finally, he was admitted to the Thin-gan-gyun San-pya Hospital on5October 2007 and passed away on3November 2007.
From : New Lie Of Myanmar/ Nov 07, 2007
Posted by Peaceful Walking at 2:26 PM0comments
ဒါကြောင့် နေ နေရတဲ့ ..ခရီးသွားများ
လူမြင်ဘုကျ မိုက်ကြည့် ကြည့်က
ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘဝကို ..သမိုင်းရေးခြင်သလား
အမှန် နဲ့ အမှား
စာကြွင်း၊၊ ၊၊ မင်း = ဦးသန်းရွှေ(ဝါ)နအဖ ကို ရည်ညွန်းပါသည်၊၊
ခရီးသွားများ = (၅၃)သန်းသောလူထုကိုရည်ညွန်းပါသည်၊၊
Posted by Peaceful Walking at 2:49 PM0comments
အခုပြောမည့်အကြောင်းကို ပြောဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ သေချာစွာ စဉ်းစားခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖွင့်ဟ မပြောမိခဲ့မိရင် တိုင်းပြည် နဲ့လူမျိူးကို လိမ်လည်ရာ ကြမယ့်အဖြစ်ကို အဖြစ်မခံနိုင်တဲ့အတွက် အခုလို အသိပေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အခု ပြောမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ ဆန္ဒမပါပဲ ပြုလုပ်ခဲ့ရတဲ့ နေ့ တစ်နေ့အတွက် ကျွန်တော်တို့အားလုံး စိတ်အဆင်းရဲဆုံးနေ့ ဖြစ်ခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ဟာ xxxx တက္ကသိုလ်မှာ xxxx ၀န်ကြီးဌာနက ဖွင့်လှစ်ခေါ်ယူတဲ့ စံပြအင်ဂျင်နီယာ ဆရာဖြစ် သင်တန်းကို တက်ရောက်နေသူများဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ xxxx ၀န်ကြီးဌာနကနေ ပေးအပ်တဲ့ (တိတိကျကျ ပြောရမယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည် နဲ့ပြည်သူလူထုက ပေးအပ်တဲ့) လစာကို စားပြီး ကျောင်းတက်နေကြသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိအစိုးရ၀န်ထမ်းဖြစ်နေရတော့ အခြားဝန်ထမ်းများလို တစ်ခါတစ်ရံမှာ တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုး မျက်နှာမထောက်မိဘဲ ခိုင်းတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကို ကိုယ်ရဲ့ ဆန္ဒမပါဘဲ လုပ်ဆောင်နေရတယ်။
ဒီလို မလုပ်ချင်ဘဲ လုပ်နေရတာကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အခြေအနေအရရော ကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ မိဘများနဲ့သွေးချင်းသားချင်းများကို အရေးယူမှာ စိုးလို့ ပါ။ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနဆိုင်ရာလူကြီးတွေက စာချုပ်များ ချုပ်ဆိုစေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ အတွက် သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ တာဝန် ထမ်းဆောင်မပြီးမချင်း (ဒါမှမဟုတ်) သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ ငွေကြေးတန်ဖိုး မပေးလျော်မချင်း သူတို့ ခိုင်းစေချက်များကို တစုံတရာ လိုက်နာခြင်းမပြုခဲ့ရင် သူတို့ အနေနဲ့ကြိက်နှစ်သက်သလို အရေးယူခံမှာဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
ပြောချင်တဲ့ အဓိက အကြောင်းအရာကိုတော့ ပြောပြချင်ပါတယ် ။
၄-၁၀-၂၀၀၇ ရက်နေ့ မတိုင်မီ ရက်တွေက ကျွန်တော်တို့အားလုံးကို သက်ဆိုင်ရာဌာနမှုးများမှတဆင့် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့နအဖအစိုးရအား ထောက်ခံပါကြောင်း၊ အနောက်နိုင်ငံများရဲ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို မလိုလားပါကြောင်း၊ တိုင်းပြည်အေးချမ်းမှု နဲ့အေးချမ်းစွာ ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိနိုင်ရေးတို့ကို လိုလားပါကြောင်း၊ ပြည်တွင်းမငြိမ်မသက်မှုများကို မလိုလားပါကြောင်း တို့ကို လက်မှတ်ထိုးစေပြီး ကုလသမဂ္ဂသို့ တင်သွင်းပေးရမယ်လို့ အတင်းခိုင်းလာတာပါ။ ဒါပေမယ့် အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနတွေကို ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ကောင်းကောင်း နားလည်လို့စံပြအင်ဂျင်နီယာ ဆရာဖြစ်သင်တန်းကိုတက်ရောက်နေကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့သင်တန်းသား သင်တန်းသူအားလုံး တစ်ယောက်မျှ ဒီအတင်းခိုင်းစေတောင်းဆိုချက်တွေကို လက်မှတ်ထိုးတာ မလုပ်ခဲ့ပါဖူး။
ကျွန်တော်တို့ စိတ်တွေထဲမှာ တစ်ဘက်ကလည်း မြန်မာ့ပြည်အရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂကနေ အကူအညီပေးရေး တောင်းဆိုချက်များကို အင်တာနက်မှာ ၀င်ရောက်လက်မှတ်ထိုးပေးချင် စိတ်များ ပေါက်ဖွားနေပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ မပြုလုပ်ရဲဖြစ်နေကြပါတယ်။
ဒါနဲ့ အပြင်ကျောင်းများတွင် တက်ရောက်နေကြတဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ လို အစိုးရ၀န်ထမ်းမဟုတ်တဲ့ ပုံမှန်ကျောင်းသားများကို မေးမြန်းကြည့်ရာတဲ့အခါမှာ သူတို့ တို့အားလုံးကို လည်း သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေက အလားတူခိုင်းစေမှုတွေ ရှိနေကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှ လက်မှတ်မထိုးကြကြောင်း၊ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ပိတ်ပင်မယ်လို့ချိမ်းခြောက်လာလို့ သာ ကျောင်းသားအချို့ တောင်းဆိုချက်များကို မလုပ်ချင်ဘဲနဲ့လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ရကြောင်း သိရပါတယ်။။
ဒါနဲ့၎-၁၀-၂၀၀၇ နေ့ရောက်တော့ xxxx တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် xxxx က xxxx တက္ကသိုလ် ပင်မဘွဲ့နှင်းသဘင် ခန်းမမှာ ကျွန်တော်တို့ ၀န်ထမ်းသင်တန်းသား အားလုံးကို ခေါ်ယူပြီးတော့ "တိုင်းပြည်ကို မချစ်ဘူးလား၊ ချစ်ရင် လက်မှတ်ထိုးကြရမယ်" လို့ဆွဲဆောင်စည်းရုံးပြီးတော့ ကျွန်တော့်တို့အား အတင်းအဓမ္မ လက်မှတ်ထိုးခိုင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံး လက်မှတ်ထိုးဖို့ဆန္ဒမရှိလို့ဘယ်သူမှ လက်မှတ်မထိုးကြသေးပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ လက်မှတ်တွေ မရရင် ဆရာမကြီးအတွက် ဒုက္ခရောက်မှာကို စိုးရိမ်ကြတာရော၊ ဆရာမကြီးကိုယ်တိုင် က ဒီိပြဿနာတွေကို သိလို့ကျောင်းသားတွေကို ငိုယိုတောင်းပန်ခြင်းလာလို့ ရော။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ ရှေ့ရေး၊ မိသားစုရှေ့ရေးကို ထိခိုက်မှာ စိုးရိမ်ရလို့ ရော ကျွန်တော်တို့တွေ နောက်ဆုံးမှာ အလုပ်ချင်ဘဲ ဆန္ဒမပါဘဲ လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အားလုံး ချက်ချင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ အသင့်လာပေးထားတဲ့ စာရွက်တွေပေါ်တွင် မယုတ်မလွန် အခုလိုဘဲ ဖော်ပြလက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့ကြပါတယ်။
၁။ မိမိတို့အားလုံးသည် တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးကို ချစ်မြတ်နိုးပါသဖြင့် တိုင်းပြည်အေးချမ်းမှုကို လိုလားပါသည်။
၂။ မိမိတို့သည် အေးချမ်းစွာပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိမှုကို ချစ်မြတ်နိုးပါသည်။
လို့ ဘဲ နအဖအစိုးရအတွက်မဟုတ်ဘဲ လက်မှတ်ရေးထိုးပေးခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုလို လက်မှတ်ရေးထိုးဖော်ပြချက်များ၊ တစ်တိုင်းပြည်လုံးရှိ ၀န်ထမ်းများစွာ၊ ကျောင်းသားများတို့ လည်း ကျွန်တော်တို့နဲ့ အလားတူ ဖိအားပေးခံရမှု ကြောင့် ဆန္ဒရင်းမှန်မပါဘဲ လက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့ရသော ဖော်ပြချက်များကို နအဖက လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံမှာ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေး ဖော်ဆောင်ဖို့ရောက်ရှိနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီကို ကြွားလုံးထုတ်ပြီး တင်ပြလိမ့်မယ်လို့သိရှိရပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ ရင်ထဲက မလာဘဲ၊ ဖိအားပေး မှုကြောင့် ရေးသားခဲ့ရတဲ့ ဒီ လက်မှတ်ထိုး ဖော်ပြ ချက်တွေကို အမှန်အတိုင်း သိကြဖို့မြန်မာတစ်ပြည်လုံး၊ တစ်ကမ္ဘာလုံး သိရအောင်၊ အထူးသဖြင့် ကုလ သမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်တော် နဲ့ကုလသမဂ္ဂ နဲ့အခြား အရေးပါတဲ့ အဖွဲ့အစည်း တွေ၊ မြန်မာ့ အရေးလှုပ် ရှားသူတွေအားလုံးကို မီဒီယာများကနေ တဆင့် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ မပြန်မီ အလျှင်အမြန် အရေးတကြီး အချိန်မီ တင်ပြပေးစေလိုပါတယ်။ အားလုံးဝိုင်းဝန်း လုပ်ပေးကြပါ။ မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီကို နအဖကပေးမယ့် လက်မှတ် ထိုးစာရွက်စာတမ်းတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေ ကျောင်းသားတွေ ပြည်သူတွေကို အတင်းဖိအားပေးခိုင်းပြီး ခြိမ်းခြောက်ပြီးထိုင်းခိုင်းတဲ့ စာရွက်စာမ်းတွေပါလို့ ။ ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲ ကတကယ်ဖြစ်စေချင်တာက မြန်မာပြည်အရေးကို ကုလသမဂ္ဂကနေ ထိထိရောက်ရောက် ၀င်ရောက် ဆောင်ရွက်စေချင်တာပါ။
ဤမှန်သော ကျွန်တော်တို့ရဲ့သစ္စာစကားကြောင့် မြန်မာပြည် အနာဂတ်ခရီး ချောမွေ့ပြီး အသက်သွေးချွေးများ မပေးလှူရပဲ တိုင်းပြည် အေးချမ်းမှုဖွံ့ဖြိုးမှု ကို အချိန်တိုအတွင်း ရရှိပါစေသား။
Posted by Peaceful Walking at 8:38 PM0comments
Posted by Peaceful Walking at 2:02 AM0comments
U2 360° Walk On Aung San Suu Kyi Burma Myanmar
စက်တင်ဘာ နှစ် ပတ်လည်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်
FREE DAW AUNG SAN SUU KYI!
“ကျမ ပြစ်မှု မကျူးလွန်ဘူး”
free Aung San Su Kyi
အိန္ဒိယ ရောက် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ၏ "အောင်ပွဲဆင်ဖို့ထောင်ထဲဝင်စို့" သံချပ်များ (2009 သင်္ကြန်)
2009 Thanchat present by Activist group from India
Campaign For 2010
U Thant at the United Nations
The Lady and the General
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ် မြောက်ရေးအတွက် တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲ
ဓါတ်ပုံ ။ ထွဏ်းမြင့် 品川ミャンマー大使館前
In front of UN
ပြည်တွင်းမှ အင်တာနက်စတင်သုံးစွဲသူများ၊ အသုံးပြုနေ သော်လည်း အမှားအယွင်းပြနေသူများအတွက် ဤဇော်ဂျီ ဓါတ်ပုံကိုနှိပ်၍ အများသုံး ဗမာဖောင့် ကိုရယူပါ။ Click here, you may get fonts to read the square fonts. Zawgyi-One latest version1.0.0.1.1 Keyboard layout ကဒီမှာ ******
Mr kenji nagai memorial2792009 infront UN,Tokyo
「長井さん殺害から1年 機密文書を入手 "射撃対象"の文字」(1)
Myanmar's Army shoot and killaJapanese news photographer
6 .သတ္တိစားဖက်များ ရေး/ ဆို ..အလိမ္မာ (japan)
6 .သတ္တိစားဖက်များ ရေး ဆို ..အလိမ္မာ (japan)
5 .လုံးပါးပါးခြင်း ရေး/ ဆို ..အလိမ္မာ (japan)
4 .ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရေး/ဆို ..အလိမ္မာ (japan)
1 .အခွင့်အရေး ရေး/ဆို ..အလိမ္မာ (japan)
1 .အခွင့်အရေး ရေးဆို ..အလိမ္မာ (japan).mp3 -
3.ကန့်ကွက်လိုက်ဦး ရေး/ဆို ..အလိမ္မာ (japan)
2 .ကြွေနေတဲ့ကြယ်..ငိုနေတဲ့လ ရေးဆို ..အလိမ္မာ (japan)
2 .ကြွေနေတဲ့ကြယ်..ငိုနေတဲ့လ ရေးဆို ..အလိမ္မာ (japan).mp3 -
လူဆိုးများ၏သတင်းစုံ အသားထဲမှ ထွက်တဲ့လောက်များ.. ..
လွတ်မြောက်ရေး အတွက် တိုက်ပွဲ ၀င်ကြ
ကမ္ဘာမကြေဘူးဟေ့ (Generation Wave)
ရဲရဲသာ..ရှေ့ ဆက်လျောက်စို့ ..
ပြည်သူ့ တို့ ရဲ့အသံ..ရင်၏ဆန္ဒအမှန်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့ အစည်းများနှင...
မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာပေါ်က ထုံးစံအတိုင်း ဗြောင်လိမ်နေ...
နှစ်သက်ရာကို..ရွေးချယ်ဖတ်ရှုပါ။.. လွတ်မြောက်ရေး အတွက် တိုက်ပွဲ ၀င်ကြ ကမာနီလာ ကိုထိုက် ကိုရင် ကဒေါင်းညင်သာ စိတ်ဓါတ် ဆုံစည်းရာ ဇော်ဘားမား ဒီတော့...ဘာဖြစ်လည်း.. ဒေါင်းကွင်းမှ..ဒေါင်း နစ်နေမန်း နှင်းခါးမိုး ပုထုဇဉ် မဖြူဖြူသင်း ဘုန်းဘုန်း မသဒ္ဓါ လင်းလက်ကြယ်စင် သင့်ကင်း လွတ်လပ်စေမည်..အမိမြန်ပြည် လူသစ် အမိမြန်မာပြည်သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာများ မေငြိမ်း မျိုးဆက်အမှတ် (၅) သမိုင်းထဲကရက်စွဲများ /"/> သီရိလင်္ကာရောက်သံဃာတော်များ ၉၆ မျိုးဆက်များ အိမ်မက်အိမ်ကလေး "/> အရှင်မေတ္တာစာရ အသားထဲမှ..လောက်ကောင်များ
သတင်းတွေ ဖတ်ချင်ရင်.. BBC News Burma Today Democratic Voice of Burma Irrawaddy Magazine khitpyaing Journal Mizzima News Moemaka. Radio Myanmar Bloggers oweway singapore Radio Free Asia
ဘလော့ကို လာလည်သူများ အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။